चुनावी प्रचारमा हिडेका कांग्रेस उम्मेदवार खेमराजको बाटोनै अबरुद्ध भएपछी….::Nepal's Digital News Portal
चुनावी प्रचारमा हिडेका कांग्रेस उम्मेदवार खेमराजको बाटोनै अबरुद्ध भएपछी….
काठमाडौं-– नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार खेमराज पौडेलसहित कांग्रेसका नेताहरू घरदैलो अभियानमा जाँदा बाटो अवरुद्ध गरिएको छ ।
पोखरा–१६ बाट अर्मला जानेक्रममा अर्मलाकोटमा बाटो अवरुद्ध गरिएको कांग्रेस नेता ऋषि काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाटो खनेर ढुंगा थुपरिएको छ । नजिकै डोजर छ तर चालक छैनन् ।
यो कांग्रेस उम्मेदवारसहित नेताहरू आउने भन्ने चाल पाएर सुनियोजित रुपमै बाटो अवरुद्ध गरिएको युवा नेता गोविन्द लामिछानेले बताए । गाडी गुडाउनै नमिल्ने गरी बाटो अवरुद्ध भएपछि उम्मेदवार पौडेलसहितका नेताहरू हिंडेरै अर्मला पुगेको बताइन्छ ।
गत कात्तिक २१ गतेदेखि शुरु भएको नेपाली कांग्रेसको चुनावी प्रचार अभियान दोस्रो चरणको बिहिबार अन्तिम दिन हो । बिहिबार पोखरा–१६ अर्मलाको घरदैलोसंगै गर्ने कार्यक्रम रहेको पार्टी सभापति कृष्ण केसीले बताए ।
कास्की क्षेत्र नं २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मंसिर १४ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपाका उम्मेदवारबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुदैछ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार खेमराज पौडेल र नेकपाले विद्या भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
कांग्रेसका उम्मेदवार पौडेल नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ६ दशक लामो संघर्ष गरेका परिपक्व र खारिएका नेता हुन् भने नेकपा उम्मेदवार विद्या भट्टराई रविन्द्र पत्नी हुन् ।
hamrakura बाट साभार